जेजु सम्झनामा - Fonij Korea
लेखक: सिमा लामा	| प्रकाशीत मिति: January 4, 2020
नयाँ बर्ष आउँछ । नयाँ क्यालेन्डरहरु झुन्डिन्छन् । जिन्दगीका नयाँ च्याप्टरहरु थपिदै जान्छन् । ती सम्झदा केही रमाइला लाग्ने छन् केही नरमाइला ।
यो बर्षलाई फर्केर हेर्दा केही नयाँ ठाउँ घुमियो । नयाँ साथीभाइ भेटियो ।
कोरियामा हुने कसलाई जान मन हुँदैन र जेजु ? मलाई पनि थियो । कहिले के नमिल्ने कहिले के नमिल्ने । जान पाएको थिइन । भर्सेला परोस यो पटक जान्छु मनमा आँट आयो । एक्लै भए पनि जान्छु । अरु बेला जाउँ जाउँ भन्दा पनि नमान्ने साथीभाइ कुरा गरेको जाने भए ।
हामी एक गु्रप जेजु घुम्न गयौ ।
नेपाली सेक्सका कुरा त्यति गर्दैनन् । यहाँ त लभ पार्क छ । पार्कमा जे जति छन् ती सबैको थिम सेक्स छ । सेक्समै केन्द्रीत छ यो पार्क । महिला र पुरुषका यौनाङ्गहरुका डिजाइन छन् । सेक्सका पोजिसन छन् । हैट लाजै मर्नु ? अरु बेला सेक्सका खासै कुरा नगर्ने कोरियनहरु पार्कमा सेल्फी खिचेका छन् । हाँसेका छन् । पर्यटकका लागि त यो आर्कषक केन्द्र नै भयो । एउटा सेल्फी त बन्ता है बोस ?
जेजु एउटा टापु न हो । कोरियनहरु व्यापार गर्न कति सिपालु छन् । केही हुदै नभाको ठाउँमा पनि हामीसँग यस्तो छ त्यस्तो छ भनेर व्यापार गर्छन् । झन् जेजुको कुरा के गर्नु प्राकृतिक रुपमा पनि राम्रो छ । अलि अलि व्यापारका लागि थपथाप गरेर चिटिक्क बनाइएको छ ।
खल्तीमा पैसा भए पछि जेजुमा नपाइने के होला ? पैसा तिर्यो साइकलमा चढ्यो । भाडामा चिटिक्क परेका गाडी तयार छन् । चढ्यो हिड्यो ।
समुन्द्रै समुन्द्र छ जेजुमा । टापु न हो । जता हेरे पनि निला समुन्द्र छन् । पसौ पसौ जस्तो लाग्ने । झरना छन् । फोटो खिच्नेको ताँती छन् । म झरना नै झरना हुने पहाड तिरबाट आएको मान्छेलाई पनि धेरै पछि झरना देखि पछि यसो पछिल्तिर फर्किएर फ्याट् सेल्फि खिच्न मन लाग्छ । स्लो मोसनमा भिडियो खिच्छु । के काम त नयाँ नयाँ फोनको ?
च्यालेन्जिङ स्कुवा डाइभिङ गर्ने मन छ । समुन्द्र भित्र पौडिदै रंगीन माछासँग फोटो खिच्ने रहर छ । साथीभाइ डराउँछन् । एक बारको जिन्दगी समुन्द्र भित्रै हरायो भने ? म यत्रो गरेर जेजुमा आको छु एउटा साहसिक खेल नखेली के फर्किनु ? एक्लै गैदिन्छु स्कुवा डाइभिङ गर्न ।
पौडी खेल्न आउँछ ? पहिलो प्रश्न सोध्छ स्कुवा डाइभिङको मान्छे ।
खासै त मलाई पौडिन आउँदैन । तैपनि भनिदिन्छु । आउँछ ।
पहिला कुनै साथीले गरेको छ ?
अप्सयो । झन्डै नसुनिने स्वरमा भनिदिन्छु ।
साथीहरु कुरा सुनाउथे । पैसा तिरेर समुन्द्र पुगेर आँट नआएको अनि फर्केको । म त्यही सम्झन्छु । तर गाइडलाई आफ्नो डर देखाउँदिन ।
गाइड र म समुन्द्रको तिरमा गयौ । उसले पानी भित्र लाउने कपडा दियो । खुट्टामा पञ्जा भएको पौडिन मिल्ने जुत्ता दियो । ढाडमा भएको अक्सीजनबाट कसरी सास कसरी फेर्ने सिकायो । इसराले कसरी संबाद गर्ने भन्ने पनि सिकायो ।
उसले जति सिकाउँदै गयो । मनमा त्यति डर लाग्दै गयो । जीवनको माया लाग्दै गयो । घर परिवार सुःख, दुःख झल्झली सम्झिएँ । धत पैसा तिरी तिरी यस्तो खेल पनि खेल्नु ?
मलाई थोरै मात्र पौडिन आउँछ । केही त हुँदैन नी ? झन्डै नसुनिने स्वरमा भनेँ ।
हुँदैन । उसले सुनेछ । उत्तर दियो ।
झ्याम्म । मेरो गाइड सुमुन्द्रमा हाम फाल्यो । उसले इसाराले समुन्द्रमा उफ्रन भन्यो ।
समुन्द्रको क्षितिजसम्म खाली निलो पानी मात्रै छ । हामी खोला देखेर तर्सिनेलाई समुन्द्रले नतर्साउने कुरै भएन । जिन्दगी यस्तै छ । झ्याम्म न्वारान देखिको साहस निकालेर समुन्द्रमा हाम फालेँ । गाइडले कसरी तैरिने फेरी सिकायो । अनि पानी भित्र अक्सिजन लिएर सास लिने तरिका फेरी सिकायो ।
हैट समुन्द्र भित्रका संसार । जति गहिराईमा गयो । माछाका हुल हिडेका छन् । मलाई छोएरै जान्छ रंगीन माछाहरु । फिल्म तिर देखेको सिन साँच्चै हुँदो रहेछ । हुनत गाइडलाई थाहा होला विदेशीलाई कता घुमाउने भनेर । म मख्खै छु ।
कस्तो छ ? गाइड इसारामै सोध्छ ।
ठीक छ । रमाइलो छ ।
इसारामै भनि दिन्छु । शायद उसले ठीकै बुझ्यो होला । पानी भित्र फोटो खिचिदियो । माछाहरु फोटोमा देखिए । अघिसम्मको डर हट्यो । यस्तै होला सगरमाथा चढ्नेहरु धेरैलाई । हाम्रा शेर्पाहरुले उकाली चढ्न सक्नेहरुलाई धकेलेरै टुप्पामा पुर्याउँछ भन्थे । मेरो पारा त्यस्तै भो समुन्द्र भित्रको डाइभिङमा ।